Budata Beechcraft B1900D Regional Airliner FSX - Rikoooo
downloads 34 665
Dị mma nke ukwuu panel na abụọ nsụgharị. All ngwá bụ ọtọ.
19 oche, ike na zuru aga aga, na-enwu na echiche textures. -Agụnye a 2D panel na mebere kokpiiti na a "Complete njem ụlọ, asaghe njem ụzọ na steepụ, ibu ụzọ na a" omenala ụda. Dakọtara na osooso / SP2.
An add-on ka anyi si choo.